Ampidino Discord ho an'ny Windows
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (62.60 MB)
Discord dia azo faritana ho toy ny fandaharana fifampiresahana feo, lahatsoratra ary horonan-tsary novolavolaina taminny fandinihana ny filanny mpilalao. Discord, programa fifandraisana malaza indrindra izay tianny mpilalao manana mpampiasa mavitrika mihoatra ny 100 tapitrisa isam-bolana, mpizara mavitrika 13,5 tapitrisa isan-kerinandro, ary fotoana fifampiresahana mpizara 4 lavitrisa isanandro, dia azo ampiasaina aminny Windows, Mac, Linux, finday (Android sy iOS) sehatra rehetra .
Ampidino ny Discord
Discord, izay rindrambaiko azonao sintonina sy ampiasainao maimaimpoana aminny solo-sainanao, dia mahazo ny fankasitrahanny mpampiasa aminny alàlanny fanolorana ireo fiasa natolotry ny rindrambaiko fifampiresahana feo hafa ampiasaina aminny lalao toa ny Teamspeak maimaim-poana. Discord dia vahaolana tsara aminny chat aminny chat video satria manolotra ny endriny rehetra izy nefa tsy mampihena ny fahombiazanny lalao ao aminny rafitranao.
Ireo mpampiasa Discord dia afaka mamorona fantsom-pifandraisana hafa. Azonao atao ny mifamadika aminireo fantsona ireo aminny fotoana rehetra. Azonao atao ihany koa ny mametraka ny fahazoan-dàlanny fantsona nosokafanao. Ny zavatra mahafinaritra momba ny Discord dia ny hoe tsy mila mandoa ny hofan-tranonny mpizara ianao vao mamorona fantsona. Ny fantsona izay idiranao na naorinao ao aminny Discord dia voasokajy ho toy ny fifampiresahana an-tsoratra na fantsom-pifanakalozan-kevitra. Aminizany fomba izany dia atolotra endrika madio. Ny programa, izay misy endrika fifampiresahana aminny vondrona, dia ahafahanny mpampiasa maro manao antso am-peo aminny fantsona iray ihany.
Ireo mpampiasa miresaka aminny Discord dia afaka mizara sary, rohy aminny tranokala ary hashes mora foana. Noho ny fanohananny GIF ny programa dia azo lalaovina eo aminny fikandrana aminny chat ny sarimiaina GIF. Ireto sarimiaina GIF ireto dia milalao raha tsy ny mpampiasa dia mamindra ny bokotra totozy aminny sary mihetsika. Manakana ny rafitrao tsy hanao asa tsy ilaina izany.
Misaotra ireo kinova finday anny Discord, azonao atao ny mampiasa ny programa aminny sehatra samihafa.
Fanombohana: Afaka mampiasa Discord ianao na inona na inona fitaovana ampiasainao, PC, Mac, telefaona. Ny famoronana kaonty Discord dia tena tsotra. Azonao atao ny miditra ao aminny Discord aminny alàlanny fampidirana ny adiresy mailaka sy ny anaranao.
Mamorona mpizara Discord anao: ny mpizara anao dia toerana anasana irery hiresahana sy handaniana fotoana miaraka aminireo vondrom-piarahamoninao na namanao. Azonao atao ny manavaka ny mpizara anao aminny famoronana fantsona an-tsoratra samihafa mifototra aminny lohahevitra tianao horesahina.
Manomboha miteny: Ampidiro fantsom-peo. Afaka mahita anao ny namanao ao aminny mpizara anao ary manomboka eo no ho eo ny firesahana feo na horonantsary.
Ankafizo ny fotoanao: Afaka mizara ny efijeryo aminny mpampiasa hafa ianao. Mampandeha lalao aminireo namanao, seho mivantana ho anny fiarahamonina misy anao, asehoy ilay vondrona aminny tsindry iray monja.
Arindra ny mpikambanao: Azonao atao ny manamboatra ny fidirana ho mpikambana ao aminny fizarana andraikitra. Azonao atao ny mampiasa anio endri-javatra io ho mpanelanelana, mizara loka manokana ho anireo mpankafy, ary mamorona vondrona asa azonao andefasana hafatra indray mandeha.
Asehoy ny tenanao: Aminny tranomboky emoji, azonao atao ny manamboatra ny mpizara Discord araka izay irinao. Azonao atao ny mamadika ny endrikao manokana, sarinny biby fiompinao na sarinny namanao ho emoji azo ampiasaina aminny mpizara anao.
Fanandramana manan-karena aminny Discord Nitro: Maimaimpo ny Discord; Tsy misy fetra ny mpikambana na ny hafatra. Na izany aza, miaraka aminny Discord Nitro sy Server Boost, azonao atao ny manatsara ny emoji, manamafy ny fizarana aminny efijery, manavaka ny mpizara anao.
Miresaka fikandrana aminny alàlanny haino aman-jery sy fizarana url
Azo atao ny mamorona fantsona maimaim-poana sy mitantana alàlana fantsona
Haben'ny rakitra: 62.60 MB